हाम्रो शरीरको अंगसँग मिल्दो यि १४ खानेकुराहरु, जो सोही अंगका लागि कति लाभदायक !! | सुदुरपश्चिम खबर
हाम्रो शरीरको अंगसँग मिल्दो यि १४ खानेकुराहरु, जो सोही अंगका लागि कति लाभदायक !!
प्याज काट्दा आँखाले जति पीडा भोग्छ, त्यसको सेवन शरीरका ििविभन्न कोषहरुको विकासका लागि उति नै महत्वपूर्ण मानिन्छ । प्याजले तपाईंको कोषिकामा रहेका फोहोर सामग्रीहरु बाहिर निकाल्ने काम गर्छ । आँखाबाट आउने आँसुले पनि यसलाई जनाउँछ ।
स्ट्रबेरी फ्रागार्या प्रजातिको बिरूवा हो । यो फल विश्वव्यापी खेती गर्ने गरिन्छ भने यस फलको विशेष गन्ध यसको पहिचान बनेको छ । यो दाँतको सुरक्षाको लागि उपयुक्त हुन्छ । यो फल रातो रङ्गको हुन्छ । यस फललाई ताजा फलको रूपमा साथै प्रशोधन गरी जाम, रस, आइसक्रिम, मिल्क शेकको रूपमा समेत खाने गरिन्छ । अनलाइनखबर बाट सभार
स्त्रीको खुट्टाका यी ९ संकेतहरु, जसले बताउँछ तपाईको पतिको भाग्य !!
वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसदमा दर्ता